मन्त्री दीपक मनाङेलले गरे कर्मचारीको रामधुलाई, को हुन् उनि ? — Sanchar Kendra
१राष्ट्रपतिसमक्ष भारतीय राजदूतले पेश गरे ओहोदाको प्रमाणपत्र, आजै प्रधानमन्त्रीसँग भेट
२अस्पतालका कर्मचारी बोकेको बस दुर्घटना, १ जनाको मृत्यु
३एसपीपी विवादका बीच प्रधानसेनापति अमेरिकामा : डिफेन्स युनिभर्सिटी भ्रमणपछि पेन्टागनमा भेटवार्ता
४सरकार परिवर्तनसँग जोडेर आएका प्रश्नहरुको निरुपण गठबन्धनको बैठकबाट हुन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
५भारतीय फोटोग्राफरलाई एक वर्ष कैद गर्ने झापा जिल्ला अदालतको फैसला
६अखिल क्रान्तिकारीकाे भेलाद्वारा संघर्षमा जाने निर्णय, को-को छन पहिलो निसानामा ?
७किसानहरूले लगाए कृषि मन्त्रालयमा ताला
८सरकारले अमेरिकालाई लेखेको पत्रबारे जनताले थाहा पाउनुपर्छ : भीम रावल
९खोलामा बगेर बालक बेपत्ता
१०घाटमा जलाउँदै गरेको किशोरीको शव प्रहरी नियन्त्रणमा, दिदी, आमा र ठूलीआमा पक्राउ
११जसपाले बोलायो केन्द्रीय समितिको बैठक
१२धन्सार भत्किदा सदाका लागि अस्ताइन १२ वर्षीया रेखा, वर्षाका कारण परिवारमा यस्तो पीडा
मन्त्री दीपक मनाङेलले गरे कर्मचारीको रामधुलाई, को हुन् उनि ?
काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङेले आफ्नै कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेका छन् । उनले मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका शाखा अधिकृत प्रकाश ओझामाथि हातपात गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । घटना मंगलबारको हो ।
फाइल लिएर मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेका ओझालाई मन्त्री मनाङेले हातपात गरेका हुन् । ओझाले कुटपिटबारे मन्त्रालयका सचिव बद्री अधिकारी र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पाेखरेललाई घटनालगत्तै जानकारी गराएका थिए ।
आफू हिजाेदेखि नै सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा बागलुङमा रहेकाे र ओझाले मंगलबार नै घटनाबारे जानकारी गराएकाे भए पनि सम्पूर्ण सत्थतथ्य बुझ्न बाँकी रहेकाे सचिव अधिकारीले बताए ।
ओझले मन्त्री मनाङेले आफूमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गरेकाले मंगलबारदेखि नै बिदा बस्ने जानकारी गराएकाे सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
कर्मचारी ओझाले आफू अस्पताल भर्ना भएकाे जानकारी दिएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा अगाडि नै काम सक्न भन्दै मन्त्री मनाङेले ब्रिफिङ गर्ने क्रममा विवाद बढेकाे मनाङेकाे सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।
यस्तै यता धादिङमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षलाई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेका छन्।
वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावको उम्मेदवारबारे भएको छलफलमा विवाद हुँदा खनियावास गाउँपालिका अध्यक्ष रणबहादुर तामाङमाथि मंगलबार बेलुकी आक्रमण भएको हो।
कांग्रेसका पूर्वक्षेत्रीय सभापति राजु पाख्रीनलगायतको समूहले गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङमाथि आक्रमण गरेको आरोप छ। कांग्रेस नेता तथा गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङले आफूमाथि आक्रमण भएको बताए।
‘टिकटको विषयमा कुराकानी भइरहेको थियो, मैले पनि केही कुरा राख्दा आक्रमण गरे,’ उनले भने, ‘मलाई कचौराले हानेका हुन्। कुरा राख्दा आक्रमण होला भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ।’
उनको अनुहारमा चोट लागेको छ। आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले कांग्रेसकै नेता पाख्रीनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
‘आक्रमण गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसक्यो, घटना सामान्य हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङले भने। घटना हुनुभन्दा पहिले पेस्तोल पड्केको दाबीसमेत उनले गरेका छन्।
यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङले आफू फेरि पनि पार्टीबाट उम्मेदवार हुन चाहेको कुरा राखेपछि विवाद भएको थियो।
यस्तै धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा इन्चार्ज पुन: नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएका छन्। अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी (हरि) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू माओवादी केन्द्रमा फर्किएको बताएका छन्।
उनी सोमबारमात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवास पुगेर पार्टी प्रवेश गरेका थिए। तर आफूभित्र क्षणिक आक्रोश र आवेगमा आएर राजनीतिक रूपमा गम्भीर गल्ती-कमजोरी हुन गई पुन: पार्टीमा फर्किएको उनले बताए।
‘मभित्र क्षणिक आक्रोश र आवेगमा आई राजनीतिक रूपमा गम्भीर गल्ती कमजोरी हुन गई समग्र पार्टी, बेनीघाट रोराङ र धादिङको पार्टी पंक्तिमा पर्न गएको क्षतिप्रति गम्भीर रूपमा आत्माआलोचना गर्न चाहन्छु,’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘र आगामी दिनमा माओवादी केन्द्रमा रही पार्टीको निर्णय अनुसार क्रियशील हुन्छु।’
अस्पतालका कर्मचारी बोकेको बस दुर्घटना, १ जनाको मृत्यु
एसपीपी विवादका बीच प्रधानसेनापति अमेरिकामा : डिफेन्स युनिभर्सिटी भ्रमणपछि पेन्टागनमा भेटवार्ता
सरकार परिवर्तनसँग जोडेर आएका प्रश्नहरुको निरुपण गठबन्धनको बैठकबाट हुन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
भारतीय फोटोग्राफरलाई एक वर्ष कैद गर्ने झापा जिल्ला अदालतको फैसला
अखिल क्रान्तिकारीकाे भेलाद्वारा संघर्षमा जाने निर्णय, को-को छन पहिलो निसानामा ?
किसानहरूले लगाए कृषि मन्त्रालयमा ताला
सरकारले अमेरिकालाई लेखेको पत्रबारे जनताले थाहा पाउनुपर्छ : भीम रावल